Nin mindi ku hubeeysan oo dad ku laayey maanta gelinkii dambe dalkaasi Finland | Somaliska
Nin mindi ku hubeeysan oo dad ku laayey maanta gelinkii dambe dalkaasi Finland
Dalka Finland ayaa wararka ka imanaya waxeey sheegayaan in bartamaha magaaladda Åbo ee dalkaasi uu nin mindi ku hubeeysan dad ku laayey. Ugu yaraan labbo ruux ayaa lugu soo waramayaa in falkaasi ku dhinteen.
Nin ay booliska dalkaasi xabad lugta kaga dhufteen ayaa la rusan yahay in falkaasi ka dambeeyey iyagoo booliska sheegay in falkaasi yahay mid argagaxiso. Falkan oo maanta gelinkii dambe dhacay saacada dalkaasi markii ay aheyd 4-tii galabnimo ayaan dadka ku dhaawacmay warar kala duwan ka soo baxayaan tiradooda, hase ahaatee la xaqiijiyey in labbo ruux ay naftooda ku waayeen weerarkaasi.
Dad goob joogayaal ah oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in ninka dadka mindida ku weeraray uu ku qeelinayey ”Allahu Akhbar” Hase ahaatee booliska hadalkaasi weli meeysan xaqiijin. Booliska ayaa baaritaan waxeey ugu jiraan in haddii ay jiraan dad kale oo falkaasi ku lug lahaan karro. Amaanka dalkaasi ayaa aad loo adkeeyey gaar ahaan goobaha ay adeegyada gaadiidka ka baxaan. Wasiiradda dowladda ayaa kulan deg deg ah loogu yeeray siay uga arrinsadaan falka maanta Åbo.
Ugu dambeyntiina weerarkan ayaa ku soo beegmaya maalin uun ka dib markii weerar isna loo adeegsaday baabuur dad lugu jiirsiiyey magaaladda Bercalona ee dalkaasi Isbeeyn maalintii shalay aheyd oo ay ku dhinteen dad gaaraya 14 ruux kuna dhaacwameen dad kor u dhaafay boqol ruux. Kooxda Daacish ayaa falkaasi sheegatay.